Salaalee – Guyyaa Lammaffaaf WBOn toohatamte jirtti – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSalaalee – Guyyaa Lammaffaaf WBOn toohatamte jirtti
Salaalee – Guyyaa Lammaffaaf WBOn toohatamte jirtti
Ibsa WBO Kaaba fi WBO Zoonii Kaabaa fi Kaaba Lixaa Irraa Kenname
Cuunfaa Oduu tarkaanfii WBO zoonii GG. Kaaba fi kaabaa lixaa ,aanaa kuyyuu,aanaa Dagamii fi aanaa warra jaarsoo guyyaa 08/08/2021
Iree fi gaachanni waraana bilisummaa oromoo duula operation loltuu gabroofataa aanaa kuyyuu,Dagamii fi warra jaarsoo irratti guyyaa 5/08/2021 galgala irraa jalqabeen Magaal Kuyyuu weeraree wal qabatee Humni diina Baraaragdee gana 6/08/2021 aanoota adda addaraa waan qabdu guarantee ,aanaa kuyyuu gara ganda dhaayee Willincoo deemaà turtee fi humna Reebuu dhufte bakka gabayaa kamisaa jedhamtuutti haxxeen haleelun 60 ol ajjeesun hedduushii madoon adabee jira. Meshaalee Waraana Bkm 1, Akm 20 fi rasaasa hedduu irraa hiikun qabsoof galii taasisee jira.
Ganama kana (07/08/2021)Reeffaf m Oraalii 2 fi paatroolii shaniin feetee galaa jirti.
Humni diinaa kun hedduunsaa hallayyaa fi caccabaa lafaa akkasuma madaayee baqachuun Olloota Ummataa keessatti du’aa guurate jirti.
Iree fi gaachanni ummata oromoo WBOn operation gara aanaa Dagamitti guyyuma kana sa’aa 5:30 pm
irraa eegale weerara Magaalaa Ulaa Huummoo fi Alii dooroo diina qulqulleessuf gaggeeseen humna diinaa 15 ol du’aan adabuun madoo paatroolii tokko humna diinaa guutuu waliin barbadeessun milkiin goolabee magaalota lameen too’atee jira Qabeenyan diinaa kan kaabarraa gara finfinnee imalaa turanis hojiin ala taasifamanii jiru. Yeroo ammaa karaan Gojjamii finfinnee deemu dhuunfannoo WBO jala jira.
Akkasuma duulli 3 ffaan qixa warra jaarsoo irraan taasifame diina gandoota heedduu keessaa qulqulleessun hanaga sa’a gabaasaan kun qindaa’eti (guyyaa hari’aa 07/08/2021)hedhatoota diinaa irraa meshaalee Akm 50 ol dhuunfatee qabsoo bilisummaa oromootiif galii gochuun Ummatasaa barsiisuu itti fufee jira. Waraanni gabrooftaa kaampii aanaa Dagami ganda Yaayyaa haroo maandhefatee kaambii gadhiisee baqataa yoo jiru WBon duukaa deemeetii jira. Bali’ina oolmaa guyyaa kanaa kan walitti deebinu yoo ta’u ,karaa gara Goojam deemuu guddichi too’annaa WBO jala oolee jira . vedio fi suuraa operation kana akkuma nu dhaqabeen isin biraan geenye
ODUU Hatattama WBON Warana motumma 1700 barbadesu TPLF lallibala qabachu Abiy dhokate |Moha Oromo ODDUU…
OSA ANNUAL CONFERENCE (August 7, 2021)
The Battle for Dessie